Biotite: njirimara, ojiji, ngwa na nkwụnye ego | Network Meteorology
Mgbe anyị na-ekwu maka biotite anyị na-ekwu okwu banyere otu otu mineral n'ime phyllosilicates. N'ime ìgwè mineral ndị a dịka phlogopite, annite na eastonite. Na mbụ, a na-eji aha biotite akọwa naanị otu ịnweta. Nke a gbanwere na 1998, mgbe International Association of Mineralogy kpebiri ịkwụsị iji echiche nke biotite maka otu ịnweta, mana itinye ya na otu mineral.
N'isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe bụ njirimara nke otu biotite nke mineral na kedu ihe bụ isi eji ya.
2 Kedu esi ewepụta biotite
3 Ojiji na ngwa nke biotite
4 Ebee ka ebe nchekwa biotite dị?
Otu n'ime mineral kacha mara amara na biotite bụ mica. Ọtụtụ mineral nke mejupụtara otu a bụ akụkụ nke ihe a na-akpọ mica. N'ime njirimara ndị bụ isi anyị nwere ihe ndị a:
Usoro ọgwụ nke mica K (Mg, Fe) 3AlSi3O10 (OH, F) 2.
Mineral ndị a na-adịkarị ka nkume dị egwu ma ọ bụ nke dị egwu. Anyị na-achọta ọtụtụ mica na granites, ma e wezụga feldspars.
Ọdịdị nke ịnweta a dị oke mkpa n'ihi na ọ nwere ụdị agbụ na akwa nke a na-echekwa na ibe ha.
Dị agba kachasị na biotite ha na-ejikarị ndò dị n'etiti akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na nwa.
Banyere ịdị ike ya, anyị na-ahụ na Mohs n'ọtụtụ o nwere uru n'etiti 2,5 na 3. Njupụta ya bụ 3,09.
Ọ dị mfe iji ọdịiche dị na mineral ndị ọzọ ma ọ bụrụ na i lee anya na agba ojii ya na ngbanwe ya site na efere. Na ugbo, a na-eji vermiculite mee ihe, nke bụ ụdị biotite gbanwere ma ọ ga-ekwe omume na e nwere ụfọdụ njehie na njirimara ya.
Kedu esi ewepụta biotite
Usoro mmịpụta biotite dị mkpa maka nhazi ọkwa nke mica nwetara. Dabere n'ụdị mica enwetara, enwere ike zoo ya maka ojiji a kapịrị ọnụ. Ihe mbụ a na - eme ma ọ bụrụ na a na - amịpụta biotite bụ ikewapụ ụdị nkume o si na ya pụta. Ma ọ bụ nke dị egwu, nke metamorphic ma ọ bụ nke granitic, a gha enwetara ihe ahụ na mica iche na akụkụ ndị ọzọ nke nkume. Mkpụrụ nke mineral nke a na-enweta site na nkume anaghị adịkarị karịa 1-2%.
Ozugbo enwetara obere mpempe akwụkwọ mica ahụ, a na-etinye ọgwụgwọ ịmịpụ iji belata ha ma mepụta usoro ọhụụ ọhụụ. Mgbe usoro a gasịrị, a na-ekepụta biotite ahụ dịka ogo nke efere ndị enwetara na ọkwa a jikọtara ya na nghọta ya. Nghọta bụ ihe eji agbanwe iji chọpụta oke mineral ndị ọzọ ọ nwere na ịdị mma nke elu ya. Dabere na mgbanwe ndị a, ọ ga-abụrịrị otu ojiji ma ọ bụ ọzọ
Ojiji na ngwa nke biotite
Otu otu mineral nwere ihe na-atọ ụtọ nke ukwuu, ha bụ ndị na-ebugharị ha n'otu ụdị ngwa ma ọ bụ ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere nnukwu ike na-ekpuchi ọkụ na eletrik. Inwe ike iguzogide oke okpomọkụ, ọ nwere nnukwu ebe dị iche iche eji arụ ọrụ ụlọ na ụlọ. Otu n'ime ngwa ngwa ochie nke biotite na nke anyị hụtụrụla, ọ bụ ya na-eje ozi dị ka akụkụ nke windo salamander na osisi ndị ọzọ na-ere ọkụ. Irongwè ochie ndị ahụ e ji akwa akwa nwekwara igwe mica ka e wee tinye ha n'ụkwụ ha ma ha jiri ya.
Fọdụ n'ime ojiji kachasị nso taa bụ akụkụ nke mgbidi na windo nke oven oven. N'ọhịa elektrọnik anyị nwere ike ịchọta biotite maka imepụta capacitors na transistors. Mica bụ ezigbo insulator n'etiti efere. Ndị na-anya mmiri nke na-arụ ọrụ site na nrụgide dị elu nwekwara ihe mkpuchi biotite.
Ọ bụghị naanị na e ji ya rụọ ọtụtụ efere kamakwa ọ ga-abụ site na-egweri usoro. Nke a egweri usoro nwere ike ime ma na nnukwu iru mmiri na asat. Ozugbo usoro a gafere, enwere ike ijikọ ya na ngwaahịa ndị ọzọ. N'ihe banyere mmiri ala mica, ọ na-achọkarị iji ya na ụlọ ọrụ agba na mkpuchi. Nke a bụ n'ihi na ọ nwere ezigbo mmịfe, luster na-enwu Njirimara. A na-eme ụfọdụ akwụkwọ ahụ aja nke eji mee mgbidi na ihe mkpuchi ekpuchi nke mmiri. Otu ihe a na - abụkarịkwa ihe eji eme pear. Ihe ndị a bụ ihe osise dị iche iche mara mma.
N'aka nke ọzọ, anyị nwekwara ike ịhụ na a na-eji ha na agba mpụga, akwa mmiri na agba aluminom ji ntọala mmiri-milled. Ọ bụrụ n’ịga n’ihu ịmụ banyere ojiji nke ala akọrọ ọkara, anyị nwere ike ịhụ na ejiri ya na usoro hama iji gwerie ya ma gafere na sieve. Nke a bụ otu esi ahazi ya maka ojiji dị iche iche. A na-eji mica ala akọrọ na welding mkpara, na-eme electrodes na imepụta ụfọdụ ụdị cements. A na-ejikwa ha maka imepụta taịl nile, imecha ụlọ na brik.
Ebee ka ebe nchekwa biotite dị?
Ihe nkwụnye ego nke mineral ndị a dị na India. China bụ isi na-emepụta micas. Ka ọ dị ugbu a, e nwere ụdị ahịa dị iche iche nke biotite na muscovite micas. Offọdụ n'ime nrụpụta ndị a pere mpe n'ihi na enwechaghị arụmọrụ na mgbawa ọ bụla. Ọ bụrụ na enwetara obere arụmọrụ na mgbawa ọ bụla, ọnụahịa mmepụta na-ebili na, ya mere, ọnụahịa na ahịa na-abawanye.
Nrigbu biotite na-ewere taa dị ka a enyemaka nrigbu nke ndị ọzọ na isi extractions dị ka konkiri iji belata mmepụta-akwụ ụgwọ. Nke ahụ bụ, ebumnobi bụ isi bụ mmịpụta nke granite na, dị ka ngwaahịa nke abụọ, a na-eji mmịpụta biotite eme ihe. Otú ọ dị, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ ụdị mmịpụta na-erughị uru, anyị enweghị ike ịgọnahụ na mica na-aga n'ihu na-abụ otu n'ime mineral dị ka arụmọrụ dị elu n'ihe banyere mkpuchi ọkụ na eletriki.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere biotite.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara biotite